Farmaajo oo billaabey qorshe cusub oo taageero ku raadinayo | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo billaabey qorshe cusub oo taageero ku raadinayo
Waxaa Villa Somalia ka socda saddexdii Habeen ee ugu dambeeyay Kulamo uu Madaxweynaha waqtigiisu dhamaadey la qaadanayay qeybaha kaal duwan ee bulshadda.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xilli loogu baaqayo inuu ka guuro Villa Somalia, Farmaajo ayaa billaabey inuu kulamo ku casuumo qeybaha kala duwan ee bulshadda Soomaaliyeed.
Wuxuu la kulmay bahda Warbaahinta, Dhalinyaro isaga baraha bulshadda ka taageera oo dhawaan Muqdisho banaanbax ka dhugay Caasimadda iyo Culimada diinta oo xalay uu qaabiley.
Farmaajo ayaa kulankii xalay uu Culimada la yeeshay ahaa mid xafiiskiisa uu soo qaban-qaabiyay, waxaana looga hadlay arrimaha dalka ka taagan iyo sidii hogaamiyeyaasha diinta kaalin uga qaadan lahaayeen nabadeynta dalka.
Madaxweynihii hore ayaa isku dayaya inuu taageero ka raadiyo shacabka, oo horey uga niyad jabay dowladda kadib markii uu xukunka isku dhejiyay, sidoo kalena ku fashilmay inuu doorasho si nabad ah ku dhacda uu qabto.
Sabtidii hore ayuu maamulka doorashada iyo amaanka ku wareejiyay Rooble, waxaana hadda mucaaradka ugu baaqayaan inuu iska dhiibo taliska Ciidanka qalabka sida, islamarkaana uu kasoo baxo Villa Somalia.
Farmaajo ayaa isku dayaya inuu iska dhigo hogaamiye xaldoon ah, oo dalka dantiisa u tanaasulay, si uu u kasbado kalsoonida shacabka ee uu lumiyay, waxayna cid walba aragtay dhagartiisa iyo dhibaatada uu dalka u horseeday, oo ay kamid tahay kala qeybsanaanta Ciidanka, saamileyda siyaasadda iyo amaankii oo dayacay.